I-Villa Pampagrass - I-Airbnb
10 okushiwo abanye
San Antonio, Heredia, i-Costa Rica
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-David
U-David Ungumbungazi ovelele
Nqamula ukukhathazeka kwakho kulesi sikhala esivulekile, esinokuthula esivumelana nemvelo. Inemizila, amapulazi e-BBQ, umlilo wekamu, ukubukwa kwesigodi esimaphakathi nokubukwa kwezintaba. Inempophoma encane yangaphakathi lapho ungageza khona futhi ujabulele amanzi esiphethu avela entabeni. Imizuzu engu-25 nje ukusuka esikhumulweni sezindiza saseJuan Santamaría kanye nemizuzu engu-15 nje ukusuka entaba-mlilo yaseBarva. Indawo enhle yokuvakasha noma ukwenza i-telework. Ukuxhumeka kwe-inthanethi okuhle kakhulu.
Indawo evulekile ngokuvumelana nemvelo. Imizuzu engu-15 nje ukusuka entaba-mlilo yaseBarva nemizuzu engu-25 ukusuka entabeni i-póas. Indawo ekhethekile neyimfihlo yokuphumula. Kuhle ukwabelana nezilwane ezifuywayo ngenxa yesikhala esikhulu.
1 umbhede oyidabuli omncane
5.0 · 10 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-10
I-Villa iyimfihlo ngokuphelele futhi ivumelana nemvelo. Eduze kwe-Poas Volcano ne-Barva Volcano. Imizuzu engu-25 nje ukusuka esikhumulweni sezindiza saseJuan Santamaría. Iphinde ibe nemizuzu eyi-8 kuphela, izimakethe ezinkulu, ikhemisi, izindawo zokudlela, amabhikawozi nezinto zokugcoba.
Ujoyine ngo-Disemba 2020
Imibuzo eyengeziwe ku-8820-8014
UDavid Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- San Antonio namaphethelo